Marekankan oo war ka soo saaray doorashooyinka Soomaaliya. | Shacabka Puntland	Monday, February 20th, 2017	Home
Marekankan oo war ka soo saaray doorashooyinka Soomaaliya.
Jan 5, 2017 - Post View: 902
Dowladda Marekanka ayaa ka hadashay hannaanka loogu diyaar-garoobayo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo mida madaxweynaha Soomaaliya ee la filayo dhawaan inay dhacdo.
Kaaliyaha Xoghayaha arrimaha Bulshada ee Dowladda Mareykanka John Kerry ayaa War-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay wax lagu farxo in ay tahay in la mudeeyo waqtiga ay dhaceyso Doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa, isagoo sidoo kale ku baaqay in la soo da dejiyo Doorashada Madaxweynaha.
War-saxaafadeedka waxaa kalo looga tacsiyeeyay qaraxyadii 02-dii Bishan lagu weeraray Hotel Peace oo ku dhow Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, kaas oo Mas’uuliyadiisa ay sheegteen Shabaab, waxaana uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ugu dambeyntii, Maraykanka waxa uu sheegay in uu joogteynayo taageerada adag ee Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidamada ammaanka Soomaaliya, si Doorashada Soomaaliya inta ay socoto looga hortago arbushaad dhacda.